Ahoana ny fomba hanaovana ny sary sary ao amin'ny Photoshop tsikelikely | Famoronana an-tserasera
Photoshop dia fitaovana tsara hanomezana fikitihana kanto amin'ny sarinao. Amin'ity lesona ity dia holazainay aminao ny fomba fanovana ny sary ho lasa tena pensilihazo. Tena mora izany! Raha te hahalala ianao ny fomba fanaovana ny sary sary ao amin'ny Photoshop, aza adino ity lahatsoratra ity.
1 Sokafy ny sary ary alaivo ny toerana misy azy
2 Ny sosona 1 tsy simba dia mamorona sosona 2
3 Ampiasao ny sivana gaussian blur
4 Fikasihana farany amin'ilay fitaovana Burn
Sokafy ny sary ary alaivo ny toerana misy azy
Ny zavatra voalohany hataontsika dia sokafy ny sary tianay ovaina Ao amin'ny Photoshop dia azonao atao ny misintona ny fisie fotsiny dia hisokatra ho azy izy. Ny sosona ambany dia hanao roa heny izahayMba hanaovana izany dia mandehana any amin'ny tabilao "layer" ao amin'ny menio ambony ary kitiho ny "layer duplicate". Homena ny kopian'ny anarana hoe "Layer 1".
Ny sosona 1 tsy simba dia mamorona sosona 2
Mila ny "Layer 1" miloko mainty sy fotsy. Raha hanao an'io dia safidio, mankanesa any amin'ny tabilao "sary" ao amin'ny menio ambony, "setting" ary kitiho ny "desaturate". Andao izao duplicate "layer 1"Homena ny kopia ny anarana hoe "layer 2". Manaraka izany dia hivadika ny loko an'ity sosona vaovao ity ho an'ity karazana command + io fanaraha-maso (Mac) + i (Windows). Rehefa manana ny sary ratsy ianao, ovay ny fomba fampifangaroana. Azonao atao izany amin'ny menio miseho aseho amin'ny sary etsy ambony, mifidy ny safidy Dodge loko. Ho foana tanteraka ny sary, fa aza manahy fa ndao hamboarinay!
Ampiasao ny sivana gaussian blur
Momba ny "Layer 2" hampihatra izahay a sivana manjavozavo. Mandehana any amin'ny kiheba "sivana" Ao amin'ny menio ambony, kitiho "Blur" ary safidio ny "Gaussian blur". Hisokatra ny varavarankely kely araka izay azonao atao Manova ny soatoavin'ny onjam-peo. Arakaraka ny maha-avo ny sanda omenao azy no hahitana ambaratonga bebe kokoa amin'ny antsipirian'ny sary. Noho izany Aleoko avela ankavia kokoa, amin'ny 8, mba hanamafisana ny vokan'ny sary pensilihazo.
Fikasihana farany amin'ilay fitaovana Burn
Izay efa ananantsika dia sahala amin'ny sary, fa andao handeha dingana iray lavitra mba hanatsara kokoa ny valiny. Ao amin'ny baraovana no hahitantsika ny Fitaovana may. Ao amin'ny menio safidin'ny fitaovana dia azonao atao ny manova ny karazany sy ny haben'ny borosy ary manitsy ny haavon'ny fihenan-tsasatra. Manoro hevitra anao aho hisafidy a borosy boribory miely, lehibe ary mitazona a fihenan'ny 20 ka hatramin'ny 25%. Andao izao loko manokana amin'ny sary, amin'ity no hahazoantsika a vokany mampandeha izay hanatsara ny fisehon'ny sary. Nandoko ny faritra amin'ny volo, orona, maso, saoka aho Ahoana ny hevitrao amin'ny valiny farany? Raha te hanohy hianatra fika ianao mba hananana fika ara-javakanto amin'ny sarinao, dia azonao atao ny mahita ny tutorial anay ny fomba fampiharana ny sivana marani-tsaina ao amin'ny Photoshop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ahoana ny fomba hanaovana ny sary amin'ny Photoshop